अर्थ/वाणिज्य Archives - Page 25 of 42 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१८ पुस २०७४, मंगलवार १४:२९ January 2, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, १८ पुस । भाेजपुर पुगेका महालेखा परिक्षकको कार्यालयका लेखापरिक्षकहरुले अनियमितता गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको क्यान्टिनमा खर्च गरेको ३२ हजार रुपैयाँ सरकारी कार्यालयका लेखा अधिकृतहरुलाई ‘पैसा उठाएर तिर्न’ निर्देशन दिई काठमाडौं फर्केका हुन् । उनीहरुले जिविसको गेष्ट हाउसमा बसेको खर्च समेत तिरेका छैनन् । ‘लेखापरीक्षणमा जिल्ला जाने कर्मचारीको दैनिक खाना/खाजा भत्तासहित […]
१२ पुस २०७४, बुधबार २३:४८ December 27, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, १२ पुस । ट्राभल र टुर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को ५१औँ वार्षिक साधारणसभा यही पुस २८ गते आयोजना हुने भएको छ । नाट्टाको आज बसेको कार्यसमिति बैठकले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनसहितको साधारणसभा काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनले अध्यक्ष, पदाधिकारी र सदस्यसहित १६ सदस्यीय […]
काठमाडौँ । हितग्राही खाता नहुनेले अब साधारण शेयर खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार शेयर खरिदका लागि अनिवार्यरुपमा उक्त खाता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डका अनुसार अझै पनि तीन लाख बढीले त्यस्तो खाता खोलेका छैनन् । हितग्राही खाता नहुनेले निकट भविष्यमा नै आउन लागेको साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको साधारण […]
११ पुस २०७४, मंगलवार १४:५७ December 26, 2017 Nonstop Khabar
दोलखा, १० पुस । ग्रामीण क्षेत्रको सेवालाई प्राथमिकता दिन प्राइम कमर्सियल बैंकले दोलखाको मैनापोखरीमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका अन्तर्गत ५ नम्बर वार्ड मैनापोखरी दोलखाको दोस्रो आर्थिक केन्द्रका रुपमा मानिन्छ । यसअघि कुनै पनि बैंकका शाखा नरहेको मैनापोखरीमा अब प्राइम बैंक पहिलो कमर्सियल बैंक बनेको छ । बैंकका सञ्चालक दिनेश श्रेष्ठले […]
९ पुस २०७४, आईतवार १५:१० December 24, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, ९ पुस । आफुलाई अब्बल दर्जाको बैंक भन्दै प्रचार गराउने सनराइज बैंकले ग्राहकहरुलाई ठग्ने कार्य गरेको खुलासा भएको छ । सनराइज सेफ डिपोजिट लकर सुविधा, भिसाडेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, रेमिट्यान्स, सनराइज माइक्रो बैंकिङलगायत आधुनिक बैंकिङ सेवाहरुलगायतका आकर्षक नाराहरुमार्फत् उक्त बैंकले ग्राहकलाई आकर्षित बनाउने र ठगी गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको एक ग्राहकले गुनासो […]
नेपालको २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो
८ पुस २०७४, शनिबार २३:४१ December 23, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, ८ पुस । दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो रहेकाे पाइएकाे छ । सरकारको सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणा अन्ततः कागजमा सीमिति भएको देखिन्छ । सामूहिक, करार र सहकारी खेतीसम्बन्धी ऐन नभएका कारण घोषित अवधारणा लिखितमा मात्रै सीमित हुन गएको हो । भूमिहीन किसानलाई जमिन उपभोग गर्ने दिएर आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई […]
‘कर्पोरेट फ्रड’ मा प्रोफेसनल इथिक्स र गभर्नेन्सको भूमिकाबारे बहस
८ पुस २०७४, शनिबार १९:४२ December 23, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौैं, ८ पुष । काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेनेजमेन्ट (कुसुम) र एसीसीएको संयुक्त आयोजनामा ’कर्पोरेट फ्रड’ मा प्रोफेसनल इथिक्स र गभर्नेन्सको भूमिका’ विषयक गोष्टी सम्पन्न भएको छ । शनिबार काठमाडौँको होटल हिमालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त सुर्यनाथ उपाध्याय, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडा, बैंक अफ काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी […]
रङ्गेहात पक्राउ परेका बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक बिरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर
५ पुस २०७४, बुधबार ०७:३२ December 20, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । बैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौंका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे, शाखा अधिकृत कृति वल्लभ पौडेल र नायव सुव्वा खड्गबहादुर के.सी बिरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ । एक म्यानपावर कम्पनीको कामकाज तथा बैंक खाता सर्वोच्च अदालतले रोक्का फुकुवा गर्न आदेश भइसकेको अवस्थामा शाखा अधिकृत पौडेल र ना. सु. खड्गबहादुर के।सीले सोही प्रयोजनका लागि […]
शिवम् सिमेन्टले ३७ करोडको आईपीओ निष्काषण गर्दै
५ पुस २०७४, बुधबार ०१:४० December 20, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं । शिवम् सिमेन्टस लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई ३७ करोड बराबरको ३७ लाख कित्ता सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले पुस २५ गते बोलाएको दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा आइपीओ निष्कासनको विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने भएको छ । कम्पनीको कुल जारी पुँजी ३ अर्ब ७० करोड मध्येको १० प्रतिशत अर्थात ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको […]